कोरोनाका कारण औसत आयुमा कमी, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक यस्तो देखिएको खुलासा | Ratopati
कोरोना भाइरसका कारण संसारभरी औसत आयु कम भएको छ । यो दाबी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकाअनुसन्धाता सन् २०२० को मृत्युको आँकडालाई आधार मानेर बताएका हुन् । इन्टरनेशनल जर्नल अफ एपिडेमियोलोजीमा प्रकाशित शोधका अनुसार यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक वर्षभित्र मानिसको आयुमा आएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो ।
वर्ल्डोमिटरका अनुसार संसारभरी २९ सेप्टेम्बरसम्म ४७ लाखको मृत्यु कोभिड–१९ का कारण भएको छ । यसमा पनि अमेरिकामा सबैभन्दा बढी ७.११ लाख मृत्यु भएको छ । त्यसपछि ब्राजिलमा ५.९५ लाख र भारतमा ४.४७ लाखको मृत्यु भएको छ । यो अनुसन्धानले के भन्छ ? यो कसरी र किन भयो ? यसको नतिजाले के भन्छ ? कोभिड–१९ ले मृत्यु दरलाई कसरी बढाएको छ भन्ने बारे पनि जानकारी लिऔं ।
यो शोधको उद्देश्य के हो ?
औसत आयु​मार्फत् कुनै पनि व्यक्तिको औसत आयुको अनुमान लगाउने गरिन्छ । औसत आयु जीवनको वास्तविक अनुमान नभई त्यतिबेलाको मृत्यु दरलाई आधार बनाएर भविष्यमा कुनै व्यक्तिको जीवन कति लामो हुनेछ भनेर यसमा आँकलन गरिन्छ ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धाताको उद्देश्य भिन्न भिन्न देशमा कोभिड–१९ ले मानिसको जीवनकाल अर्थात् लामो आयुमा के कस्तो असर पारेको छ भनेर पत्ता लगाउनु हो । महामारीका कारण कुनै देशको जनसंख्याको मृत्युदरमा पर्ने असरलाई जान्नका लागि औसत आयु​को प्रयोग एक प्रमुख इन्डिकेटरको रुपमा हुने गर्छ ।
घट्यो पुरुषको औसत आयुः
के भन्छ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको शोधले ?
शोधको नतिजाले के भन्छ ?
अनुसन्धाताको समूहले २९ मध्ये २७ वटा देशमा सन् २०२० मा औसत आयुको दर घटेको पाए ।
सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०२० मा १५ देशमा महिला र १० देशमा पुरुषको औसत आयु घटेको छ । अनुसन्धाताले सन् २०१५ सँग यसकारण तुलना गरे किनभने त्यतिबेला पनि फ्लूको मौसममा हज्जारौंको ज्यान गएको थियो ।
शोधका सह–लेखक डा. जोस म्यानुअल अबुर्तोले भने, ‘स्पेन, इंगल्याण्ड र वेल्स, इटली, बेल्जियमसमेत अन्य पश्चिमी युरोपेली देशमा औसत आयुमा कुनै एक वर्षमा यस्तो प्रकारको गिरावट दोस्रो विश्वयुद्धका बेला मात्रै भएको थियो ।
महिलामा घट्यो औसत आयुः
लैङ्गिक आधारमा औसत आयुको आँकडाले के भन्छ ?
सबै २९ देशमा महिलाको तुलनामा पुरुषको औसत आयु दर निकै हदसम्म प्रभावित भएको छ । अमेरिकी पुरुषमा सबैभन्दा धेरै कमी देखिएको छ । उनीहरुको औसत आयु सन् २०१९ को स्तरको तुलनामा सन् २०२० मा २.२ वर्ष कम भएको छ । त्यसपछि लिथुआनियाको नम्बर आउँछ जहाँ पुरुषको औसत आयु १.७ वर्ष कम भएको छ ।
अनुसन्धानका सह–प्रमुख लेखक डा. रिद्धी कश्यपका अनुसार अमेरिकामा औसत आयुको दर सबैभन्दा बढी घटेको छ । यसको एउटा ठूलो कारण यहाँ सन् २०२० मा काम गर्ने वर्गमा मृत्यु अत्यधिक भएको छ । यस्तै, युरोपका धेरैजसो देशमा ६० माथिका उमेर समूहमा बढी मृत्यु भएको छ ।